(Daawo):-Xogta Dahsoon Qisada Mas’uulka reer Iran ee ka degay Magaalada Trump Joogo – Hareerley News
(Daawo):-Xogta Dahsoon Qisada Mas’uulka reer Iran ee ka degay Magaalada Trump Joogo
Posted on August 26, 2019 August 26, 2019 Author Hareerley News	Comment(0)
Mareykanka ayaa maanta ka baxay heshiiska xakameynta hubka Nukliyeerka ee INF, si uu u hormariyo madaxyo cusub oo hub Nukliyeer ah. Go’aanka Mareykanka ayaa yimid kadib markii Russia ay diiday inay burburiso gantaallo cusub, oo NATO ay sheegtay inay xadgudub ku yihiin heshiiska. Heshiiskan INF ayaa waxaa 8-dii bishii December 1987-kii saxiixay madaxweynihii hore ee […]
Ilhaan Cumar: Trump markuu iga hadlaba dil baa la iigu hanjabaa
Ilhaan Cumar oo ah gabadh Soomaali ah oo ka tirsan xildhibaannada xisbiga Dimuqraadiga ee dalka Maraykanka ayaa shaacisay in hanjabaad cunsurinimo ah loo soo diray loona sheegay in lagu dili doono madal ay dawladdu qabanayso, dilkaasna uu gaysan doono “qof awood u leh oo qori wayn wata”. Ilhaam Cumar oo laga soo doorto gobolka Minnesota […]
Axmed Madoobe iyo C/Rashiid Xiddig oo lagu doortay Magaalada Kismaayo….
Xildhibaannada Maamulka Jubaland ee taabacsan garabka Axmed Madoobe ayaa madaxweyne u doortay Axmed Maxamed Islaamka halka kuwa isbeddel doonka la baxay ay Madaxweyne u doorteen C/Rashiid Maxamed Xiddig oo ka mid ahaa Golaha shacabka Soomaaliya. Magaalada Kismaayo ayaa marti gelisay Doorasho iska soo horjeedda waxaana codeyn ka dhacday Magaaladaas gaar ahaanna xarunta doorashada Jubaland Axmed […]
Siyaasiyiin mucaarad ku ahaa maamulka Jubbaland oo lagu qaabilay madaxtooyada Kismaayo